कुनै वडा कार्यालय भव्य घरमा, कुनै पाटीको बास :: शान्ति तामाङ :: Setopati
कुनै वडा कार्यालय भव्य घरमा, कुनै पाटीको बास
ललितपुर वडा नं. ३ को कार्यालय। तस्बिरः निशा भण्डारी/सेतोपाटी
पुल्चोकबाट झम्सीखेल जाने बाटोमा दुई सय मिटर भित्र छिरेपछि दायाँपट्टि भर्खरै बनेको नयाँ घर छ।
यो ललितपुर महानगरपालिका, वडा नम्बर ३ को कार्यालय हो। महानगरभित्र कमै वडा होला, जसको भवन यति आकर्षक छ।
शारीरिक अपागंतामैत्री यो भवनको पहिलो तल्लामा वडाध्यक्ष कक्ष, सोधपुछ कक्ष र पैसा तिर्ने काउन्टर छ। दोस्रोमा वडा सदस्य कक्ष, मेलमिलाप कक्ष र बैठक कक्ष छ। तेस्रो तल्लामा ५० जना अट्ने सभाहल छ। एउटा कोठा अझै खाली छ।
तीन नम्बर वडा कार्यालय यति भव्य घरमा बस्न थालेको केही महिना मात्र भयो। त्यसअिघ एउटै कोठामा खु्म्चिएको थियो। जनप्रतिनिधिहरू बस्ने, बैठक गर्नेदेखि सेवाग्राहीको काम त्यही एउटा कोठाबाट हुन्थ्यो। नयाँ भवन बनेपछि काम गर्न सहज भएको वडाध्यक्ष श्रीगोपाल महर्जन बताउँछन्।
उनका अनुसार पाँच आना क्षेत्रफलको यो भवन बनाउन एक करोड २५ लाख रूपैयाँ खर्च लागेको छ। यसमा महानगरले ९० लाख रूपैयाँ दिएको थियो।
महर्जन २०५४ सालमा पनि यो वडाका अध्यक्ष थिए। त्यतिबेलै वडा कार्यालयको निम्ति घर बनाउन जग्गा किनेर राखेका थिए। दस आना जग्गा लिएकोमा तीनतिरबाट बाटो खुल्दा केही जग्गा खेर गएको उनले बताए।
आफ्नै भवनबाट सेवा दिन थालेको यो वडाले अब एटिएम, मोबाइल चार्जर सेवा, टोकन प्रणाली लगायत सुरू गर्ने तयारी गर्दैछ। थप सेवा विस्तारका लागि पनि गृहकार्य भइरहेको छ।
ललितपुरका सबै वडा यति भाग्यमानी छैनन्।
तीन नम्बर वडासँग सुविधाजनक भवन हुँदा अलि पर जाउलाखेलको ४ नम्बर वडा कार्यालय भने 'पाटीको बास' छ। त्यहाँको हरेक गतिविधि रेलिङवाला ढोकाबाट छर्लंग देख्न सकिन्छ।
ललितपुर ४ नम्बर वडा कार्यालय रहेको सार्वजनिक पाटी। तस्बिरः शान्ति तामाङ/सेतोपाटी
यो वडाका काम-कारबाही पञ्चायतकालदेखि यही सार्वजनिक पाटीबाट चल्दै आएको अध्यक्ष नारायण केसी बताउँछन्।
‘पञ्चायत कालदेखि हाम्रो वडा पाटीको बास छ,’ उनले भने, ‘एउटै कोठाबाट सबै काम गर्नुपर्छ। अध्यक्ष, सदस्य, कर्मचारी सबै बस्ने ठाउँ एउटै हो। सेवाग्राहीको निम्ति पालो कुर्ने ठाउँ र सफा शौचालयसम्म छैन।' सार्वजनिक पाटीमा बसेकाले वर्षको सात दिन विभिन्न पर्व र जात्राका कारण कार्यालय बन्द गर्नुपर्ने उनले बताए।
यति दु:ख हुँदा पनि आफ्नै भवन बनाउने योजना छैन त?
यो प्रश्नमा वडाध्यक्ष केसीले जग्गा खोज्ने र नक्सा बनाउने काम भइरहेको जानकारी दिए। बजेट अभावले भवन बन्न केही समय लाग्ने उनले बताए। 'विस्तारै हाम्रो पनि आफ्नै घर होला नि,' उनले भने।
ललितपुर महानगरका १९ वटा वडा कार्यालयको अवस्था ४ नम्बरको भन्दा खासै फरक छैन।
महानगरको आर्थिक विकास समितिले गत पुस अन्तिम साता गरेको एक अध्ययनअनुसार २९ वटा वडामध्ये १० वटाको मात्र आफूलाई पुग्ने खालको भवन छ। बाँकी १९ वटा वडा कार्यालयमध्ये ५, ७, ८, ९, १३, १६, १८, १९ र २५ गरी नौ वटाको भवन अपर्याप्त छन्। त्यस्तै, ११ र १८ को पुनर्निर्माण गर्नुपर्ने देखिएको छ। यसबाहेक १०, २५, २३, २६ र २९ वडा भाडाका घरमा बसेका छन् भने ४ र २६ वडा सार्वजनिक पाटीबाट चल्दै आएको छ।
यो रिपोर्ट ललितपुर महानगरको कार्यपालिकामा बुझाएपछि थप काम अघि बढ्ने समिति संयोजक रविन्द्र महर्जनले बताए।
‘हामीले वडा कार्यालयहरूको स्थलगत भ्रमण गरेका थियौं। धेरै वडा कार्यालय भवनविहीन रहेछन्। यो रिपोर्ट बुझाएपछि महानगरले सुधारको काम गर्ने विश्वास लिएका छौं,’ उनले भने।
महानगर प्रवक्ता राजु महर्जनले प्रत्येक वर्ष छवटा वडाको भवन निर्माण गर्ने लक्ष्य लिएको जानकारी दिए।
‘वडा कार्यालको आफ्नै भवन नहुँदा सामुदायिक विद्यालय र अन्य सामुदायिक भवन प्रयोग गर्नुपरेको छ,' उनले भने, 'यसैलाई मध्यनजर राखेर क्रमिक रूपमा सबै वडा कार्यालयको भवन निर्माण गर्ने महानगरको कार्यक्रममा छ।'
वडा नम्बर ९ का अध्यक्षसमेत रहेका महर्जन आफ्नै वडाको भवनसमेत अपर्याप्त रहेको बताउँछन्।
'हामी दुईवटा कोठाबाट वडाको कामकारबाही चलाइरहेका छौं,' उनले भने, 'आफ्नै घर नहुँदा धेरै अप्ठ्यारो भएको छ। अहिलेको कानुनले वडालाई थप जिम्मेवारी दिएको छ। ती सबै सेवा दिन हामीसँग ठाँवै छैन। कहाँबाट दिने?’
महानगरले भवन निर्माणका लागि प्रत्येक वडालाई ७० लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजन गर्दै आएको छ। पूर्वाधारको डिजाइन महानगरमा बुझाएपछि त्यसै आधारमा बजेट निकासा हुने प्रवक्ता महर्जनले बताए।
प्रकाशित मिति: शनिबार, माघ १२, २०७५, २१:३१:००